बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ ! यतिमा कारोबार हुँदैछ आज….::Leading Nepal News
बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ ! यतिमा कारोबार हुँदैछ आज….
साउन १९, काठमाडौं । आजको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यसप्रकार रहेको छ । आजका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको खरिददर १११ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकेको छ ।यस्तै साउदी रियाल १ को खरिददर २९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ ७६ पैसा छ ।
आज कतारी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६६ पैसा तोकिएको छ । यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३९ पैसा छ । मलेसियन रिंगिट १ को खरिददर २६ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर २६ रुपैयाँ ८५ पैसा छ । कुवेती दिनार १ को खरिददर ३६४ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ३६६ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ । बहराइन दिनार १ को खरिददर २९४ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २९६ रुपैयाँ १४ पैसा छ ।
यस्तै, कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ । यस्तै अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ७५ रुपैँया ३९ पैसा र बिक्रिदर ७५ रुपैँया ८० पैसा रहेको छ । जापानिज एन १० को खरिददर १० रुपैँया ३९ पैसा र बिक्रिदर १० रुपैँया ४५ पैसा रहेको छ ।अन्य देशको विनिमयदर तल हेर्नुहोस्….